ဒတ်ရှ် မျိုးစေ့ကုမ္ပဏီ Bejo မှ မြင်းခြံရှိ ကြက်သွန်နီ တောင်သူများ၊ ကုန်သည်များနှင့် တွေ့ဆုံ | Dutch vegetable sector support Myanmar
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များ သွားရောက်ပြင်ဆင်ရန်အတွက် Bejo Zaden (De Groot en Slot) ကုမ္ပဏီမှ Mr. Rob Bekker သည် မြင်းခြံဒေသရှိ ကြက်သွန်နီ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည့် အလေ့အထများနှင့် ထွက်ရှိမှုများကို သွားရောက်လေ့လာခဲ့သည်။ Mr Rob Bekker သည် Advance Consulting မှ Ms. Jasna Michiels van Kessenich နှင့် Advance Consulting အဖွဲ့၏ ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးနှင့် Value Chain အကြံပေး ဒေါ်သီမာဝင်းတို့နှင့် အတူလိုက်ပါ လေ့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Mr. Rob Bekker သည် မြင်းခြံမြို့ ကုန်စည်ဒိုင်မှ ကြက်သွန်နီကုန်သည်အဖွဲ့များနှင့်လည်းကောင်း၊ မြင်းခြံခရိုင် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ခရိုင်ဦးစီးမှူး ဦးမြင့်လင်းနှင့်လည်းကောင်း တွေ့ဆုံပြီး စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ Bejo မှ ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို တင်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ကြက်သွန်နီ တောင်သူများ၏ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နေမှု၊ ထွက်ရှိမှုများ၊ အခက်အခဲမျာကို သွားရောက် လေ့လာဆွေးနွေးခဲ့သည်။ တွေ့ဆုံခဲ့ကြသူများ အားလုံးမှလည်း စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည့် “ကြက်သွန်နီ မျိုးကောင်းများ၊ စိုက်ပျိးရေးအလေ့အထကောင်းများကို အသုံးပြု၍ ဒေသတွင်းနိုင်ငံများသို့ ကြက်သွန်နီ တင်ပို့မှု တိုးမြှင့်ရေး” ကို ပံ့ပိုးပေးကြပြီး စီမံကိန်းတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ရန် စိတ်ဝင်စားကြသည်။
အဆိုပါ ခရီးစဉ်သည် မှတ်သားဖွယ်ရာစုံလင်ပြီး Bejo အတွက် မြင်းခြံဒေသ ကြက်သွန်နီ ကုန်သည်များ၊ တောင်သူများနှင့် လာမည့် ခြောက်သွေ့ရာသီအတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များ ရှေ့ဆက်ပြင်ဆင်ရန် အရေးကြီးသော အချက်အလက်များစွာ ရရှိခဲ့သည်။